Ividiyo: UKevin Spacey uxoxa ngezinto ezintathu zokuxoxa izindaba | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 28, 2014 NgoLwesibili, Okthoba 28, 2014 Douglas Karr
Ukukhuluma izindaba konke ukufutheka njengamanje emhlabeni wokumaketha wokuqukethwe. Futhi bekungudaba lokuxoxwa ngalo I-Content Marketing World 2014 lapho uKevin Spacey enza khona ukhiye… ekulandiseni izindaba. UMnu Spacey udabule izakhi ezintathu zokuxoxa izindaba ezinhle. Ngingeze okwami ​​ukuphawula lapha - ungabuka ividiyo yenkulumo yakhe eyisihluthulelo (ebihlelwe ngokucophelela ukusika iqoqo lezichasiso).
Ingxabano - Ibhizinisi lakho lingahle lingabi yisixazululo kunoma yini egqamile njengombhalo kaKevin Spacey, kepha kukhona izingxabano ozama ukuzixazulula. Uyisixazululo senkinga futhi yonke inkinga ingxabano. Kungaba ukungqubuzana kokukhomba ukusebenza kahle, kokufuna injabulo, kokuhlaziya imininingwane ngokunembile. Yabelana ngengxabano nezithameli zakho!
bobuqiniso - imithombo yezokuxhumana iyisiqephu esiyinhloko sobuqiniso bokuxoxa izindaba emhlabeni wokumaketha. Unethuba lokuhlinzeka ngamacala wokusebenzisa, ubufakazi, abasebenzi, futhi - nakanjani - ubuntu bakho ukwenza indaba futhi uyixoxe kahle ngendlela emangalisayo. Izindaba ngaphandle kwezinhlamvu ziyamunya… cabanga ngalokho!
Izilaleli - ufinyelela kubani, bakuphi, futhi ubafinyelela kanjani? Ngabe ukhuluma indaba yakho kuma-mediums abawasebenzisayo? Ngabe uxoxa indaba yakho ezindaweni abajwayele ukuya kuzo? Ngabe udweba indaba ngendlela exhumana nabo ngokomzwelo? Ukwazi izithameli zakho kuzokusiza ukuthi uyihlaziye kahle indaba yakho!
Mhlawumbe into ebaluleke kakhulu uMnu uSpacey ayisho ekuvaleni, yile:
Futhi khumbula… kungabazibeki engcupheni abavuzwa.
Izindaba ezigqamayo yilezo ezihlukile, lezo ezidonsa ukunaka, lezo ezixhumeka ngokomzwelo, lezo ezabiwayo. Ingabe leyo yindaba oyikhiqizayo?
Tags: okuqukethwe kwezwe lokuqukethwei-keven spaceyI-keynoteUkuxoxa ngezindaba
Njengama-apula noshizi, i-imeyili kanye nokukhangisa ngemidiya yezenhlalo